Mpanamboatra sy mpamatsy takelaka manamboatra vy - Orinasa manamboatra takelaka manamboatra andriamby
Magnetsaka boribory mifototra amin'ny fingotra ABS ho an'ny fametrahana paompy PVC milentika amina vy vita amin'ny vy
ABS Rubber based Round Magnet dia afaka manamboatra sy mametraka ny fantsom-pifanarahana PVC voafatotra tsara sy mafy amin'ny vy miasa. Raha ampitahaina amin'ny lovia fametahana andriamby, ny akorandriaka vita amin'ny ABS dia malefaka mifanaraka amin'ny savaivony anatiny tsara indrindra. Tsy misy olana mihetsika ary mora esorina.
Magnetic Plate Holder Miaraka amin'ny Thread-Pin azo ovaina ho an'ny manamboatra socket Magnet D65x10mm
Ny mpihazona takelaka magnetika dia novokarina mba hampidirana faladiany misy kofehy, tanany amin'ny tontonana beton amin'ny famolavolana vy. Ireo andriamby dia manana fananana adhesion stromg tena miteraka vahaolana maharitra sy maharitra.
1.3T, 2.5T, 5T, 10T Steel Recess Magnet teo aloha ho an'ny fametahana ny vatofantsika
Steel Recess Magnet teo aloha dia natao tsara hanamboarana ny vatofantsika mitaingina amin'ny lasitra eo anilany, fa tsy fametahana varahina nentim-paharazana teo aloha. Ny endrika semi-sphere sy ny lavaky ny srew eo afovoany dia manamora ny fanalana azy amin'ny tontonana beton rehefa manao demoulding.
Telozoro andriamby vy Chamfer L10x10, 15 × 15, 20 × 20, 25x25mm
Steel Magnetic Triangle Chamfer dia manome toerana tsara sy haingana ho an'ny famoronana sisiny beveled eo amin'ny zorony sy tarehin'ny rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny beton eo am-pananganana vy.
M16, M20 dia nanisy takelaka fanamafisana andriamby ho an'ny rafitra fanamafisana sy fisakanana
Ny takelaka fanamafisana andriamby natsofoka dia natao hanamboarana ireo kirihitra misy kofehy ao anaty famokarana beton. Ny hery dia mety 50kg hatramin'ny 200kgs, mety amin'ny fangatahana manokana amin'ny hery mitazona. Ny savaivain'ny kofehy dia mety M8, M10, M12, M14, M18, M20 sns.